Tiirka kuul birta aan birta ahayn
Ahama waa soo gaabin ee ahama steel u adkaysta steel. Waxay u adkeysaneysaa warbaahinta daciifka ah sida hawada, uumiga, biyaha ama birta birta ah, waxaana loo yaqaan birta birta ah. Daxalka u adkaysta warbaahinta daxalka kiimikada (acid, alkali, cusbo, iwm daxalka kiimikada) Darajada birta ...
316 kuul bir ah
1. Astaamaha: Mo lagu daro, u adkaysiga daxalka, u adkaysiga daxalka hawada iyo awooda heerkulka sare ayaa si gaar ah u wanaagsan, waxaana loo isticmaali karaa xaaladaha adag; qallafsanaanta shaqada (mid magnetic-ka ah); xoogga heerkulka sare ***; xalka adag gobolka non-magnet ...
Hababka wax lagu nadiifiyo ee badanaa loo isticmaalo birta birta ah
Hababka caadiga ah ee nadiifinta ee birta birta ah waa nadiifinta farsamada, nadiifinta kiimikada, iyo nadiifinta korantada. Seddexdan qaab waxay leeyihiin faa'iidooyin iyo khasaaro u gaar ah. 1. Mashiinka farsamada. Faa'iidada ayaa ah in qaybaha la shaqeeyay ay leeyihiin heer wanaagsan iyo hig ...
Isbarbar dhiga birta ahama
304 waa shey caan ku ah birta birta ah, 7.93g / cm3, oo sidoo kale loo yaqaan 18/8 ahama ee warshadaha. Heerkulka sare u adkaysata 800 degrees, la waxqabadka wanaagsan processing iyo adkaanta sare, waxaa si ballaaran loo isticmaalaa in warshadaha iyo warshadaha qurxinta alaabta iyo ...
Muxuu birta miridhku u miridhaa
Nooc bir ah oo awood u leh inuu iska caabiyo qiiqa oksijiinka iyo waliba awood u leh inuu iska caabiyo daxalka warbaahinta oo ay ku jiraan asiidhyada, alkalis iyo cusbada! Miridhku ma noqon doonaa? Jaleecada hore waxay umuuqataa mid been abuur ah ...
2020-07-25 15:36:07 Waxqabadka kuusha birta ahama: adkeysiga wuxuu gaarayaa 56-58 digrii, magnetic, caabbinta daxalka wanaagsan, xirashada caabbinta iyo adkeysiga Codsiga kubbada biraha biraha ah: nooc ka mid ah birta birta lagu xardho, noocyada ugu muhiimsan waa bir aan lahayn bir ...
Kubad bir birta ah oo aad u fara badan
Kubadaha biraha ahama waxaa badanaa soo saara geedi socodka birta ah ee birta ah. Waqtigan xaadirka ah, kubadaha birta birta ah ee sida caadiga ah loo isticmaalo waa 201, 302, 304, 316, 316L, 420, 440C. Kubadda birta ahama ee 440 / 440C: waxqabadka: adkaanta ayaa gaadhaysa 56-58 darajo, magnetic, go ...
Sida loo sameeyo birta birta ah ee birta ah ee birta ah, sida wax loo soo saaro, iyo qalabkan wax soo saar
Ahama waa bir bir ah. Bir aan xadi lahayn ayaa loola jeedaa bir u adkaysata warbaahinta daciifka ah sida hawada, uumiga, iyo biyaha, iyo qalabka kiimikada wax u dhima sida acid, alkali, iyo cusbo. Waxaa sidoo kale loo yaqaan birta u adkeysata aashitada. Ficil ahaan ...
Ball Ss304, 3mm Kubadda Maarta ah, 3mm Kubadda Maxaas, Kubad Naxaas adag, Kubbad naxaas ah, Kubad Naxaas adag,